Southeast Asia - McKnight Foundation
Gool: Waxaanu taageernaa habab isku dheelitiran xuquuqda ilaha bulshada iyo maamulka khayraadka dabiiciga ah.
Barnaamijka Koonfur-bari Asia wuxuu maal-galiyo dhexdhexaadiyeyaasha, barnaamijyada, iyo mashaariicda si loo yareeyo shaqada isbeddelka firfircoon ee gobolka hoose ee Mekonga ee Koofur-bari Aasiya (Laos, Cambodia, iyo Vietnam). Waxaan sidoo kale la shaqeyneynaa wadashaqeyn maxalli ah, qaran, iyo caalami ah si loola tacaalo aqoonta, dhaqanka, iyo siyaasadaha saameynaya habka ay bulshadu u taageerto inay yeeshaan cod xoog leh iyo awood dheeraad ah oo go'aan gaar ah.
Barnaamijku wuxuu bixiyaa qiyaastii $ 2 milyan oo ah deeqda sanadlaha ah, wuxuuna maal-galiyay in ka badan $ 36 milyan oo gobolka ah tan iyo markii uu barnaamijku bilowday ku dhowaad saddex sano ka hor.
Fadlan ogow: Ka dib 35 sano oo maaliyad ah, machad McKnight waxay go'aansatay in ay shaqadeena ku soo gabagabeyso Koonfur Bari Asbuuc sanadka 2021. Taas macnaheedu waa ma aqbalno wax soo jeedin cusub oo maalgelin ah. Ka dib markii qiimeyn buuxda ee barnaamijka iyo sidoo kale fursadaha saldhigga iyo fursadaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah, guddiga ayaa ku soo gabagabeeyay in ay u fiicnaan lahayd in ay hagaajiso shaqadeeda caalamiga ah. Waxaan si qoto dheer u sharaxnaa xiriirka muddada fog ee aan dhisnay bulshada dhexdeeda waxaanan ku qanacsanahay dhammaan deeq-bixiyeyaasheena in ay ku guuleysteen in ay taageeraan hab-nololeedyada waara iyo ilaalinta xuquuqda dabiiciga ah.